Ku saabsan - Xarunta EcoTechnology
Xarunta EcoTechnology waxay caawisaa dadka
iyo ganacsiyada oo keydiya tamarta isla markaana yareeya qashinka.
Abaalmarinta Alan iyo Laura
CET, waan aaminsanahay taas kasta Anaga ayaa awood u leh in aan isbedel sameyno. Baahida loo qabo in wax laga qabto isbeddelka cimilada iyo in la dhiso isbeddel cadaalad ah oo siman oo loo maro dhaqaalaha kaarboon-yar ayaa aad uga degdeg badan sidii hore. Waxaan la shaqaynaa la-hawlgalayaasha dalka oo dhan si aan u beddelno habka aan u nool nahay iyo shaqada - bulsho, dhaqaale, iyo deegaan wanaagsan.
In ka badan 45 sano, ururkeenna cusub ee aan macaash doonka ahayn wuxuu soo bandhigay xalal wax ku ool ah si loo badbaadiyo lacagta, loo kordhiyo caafimaadka iyo raaxada guryaheena, iyo in laga caawiyo ganacsiyada inay si wanaagsan u qabtaan.
CAGA AYAAN SAMAYNAA DAREEN
Si loo baaro, loo horumariyo, loo muujiyo loona dhiirrigeliyo tikniyoolajiyaddaas oo leh saamaynta ugu yar ee khalkhalka ku leh deegaanka dabiiciga ee Dunida.
Laga bilaabo 2020-2022, waan caawin doonnaa 115,000 oo qof iyo ganacsato:
Iska yaree qiiqa kaarboon ee u dhigma ka saarista 100,000 baabuur wadada dhinaceeda muddo sanad ah
Hayso 120,000 tan qashinka ka baxsan qashinka
Kaydi tamarta u dhiganta korontada 35,000 guri muddo sanad ah
Abuur $ 75,000,000 keydka noloshaada
Oo waxaan irbadda ku wareejin doonnaa dadaallada cusub ee tijaabada ah:
Mashaariicda dhimista kaarboonka maxaliga ah
Dib-u-habeyn qoto dheer / koronto istiraatiiji ah
waxay ku furantahay daaqad cusubMacluumaadka Dhaqaale
Xarunta EcoTechnology waa Kaqeybgale Platinum oo ka socda Isweydaarsiga GuideStar, oo ay bixiso Musharax, Inc., oo ah isha koowaad ee macluumaadka aan faa'iido doonka ahayn. Shaabadani waxay muujineysaa sida ay nooga go'an tahay daah furnaanta iyo isla xisaabtanka. Raac xiriirka si aad u aragto warbixinnadayada maaliyadeed, IRS 990 canshuur celinta iyo in ka badan.
Laga soo bilaabo 1976, Xarunta EcoTechnology waxay gacan ka geysatay hoggaaminta jidka loo maro bulsho sii waarta iyada oo loo marayo barnaamijyo tijaabo ah oo cusub iyo adeegyo baaxad leh oo wax soo saar ah. Anaga oo la kaashanayna bulshada iyo dowlada iyo ganacsiga, dadaalkeena wadajirka ah wuxuu badalay habka aan u noolaano una shaqeyno bulsho, dhaqaale iyo jawi wanaagsan. Waa kuwan tusaalooyinka qaar ka mid ah shaqadeena sannadihii la soo dhaafay:
1970-yadii: Wacyigelinta sare loo qaaday ee deegaanka oo ay tilmaamayso maalinta koowaad ee Dunida, sharciga deegaanka ee qaranka (Hawo nadiif ah iyo biyo nadiif ah, Sharciga Tamarta Qaranka) iyo aasaasida EPA; tobanka sano ee dhibaatooyinka shidaalka iyo xayiraada saliida.
1976 - CET ayaa la aasaasay
Hantidhawrka Tamarta Guriga
1976 - CET waxaa lagu aasaasay Pittsfield, Massachusetts:
CET waa mid ka mid ah ururada deegaanka ee noociisa ah ee ka jira dalka oo dhan oo la aasaasay 1970s ilaa maantana ku jira qaab la mid ah
Horseedka ilaalinta tamarta oo ay kujirto nashqadeynta
iyo bixinta hantidhawrka tamarta ugu horreeya ee guryaha:
Shaqadan hore waxay gacan ka gaysatay gogol xaaridda wadada maanta
abaalmarin-ku guuleystay barnaamijka guud ee Badbaadinta gobolka
Hogaamiyaha tamarta dib loo cusboonaysiin karo oo ay kujirto qoraxda ugu horaysa
lagu koriyo - Beerta dhirta Berkshire.
Waxaa la daahfuray mashruuca SUEDE, oo ah barnaamij lagu soo bandhigayo cadceedda oo lagu tababaray dadka shaqo la'aanta ah aragtida qorraxda iyo ilaalinta tamarta iyo nijaarnimada, laguna rakibay 31 nidaam kuleylka qorraxda qoraxda qoysaska danyarta ah.
Waxaa lagu qabtay aqoon isweydaarsiyo macluumaad ku saabsan naqshadeynta tamarta tamarta ee dhismaha cusub, biyo kulul oo cadceedda ku shaqeeya, tamarta dabaysha, guryaha lagu koriyo qoraxda,
qoraxda dib u hagaajinaysa gurigaaga:
Teknoolojiyada iyo barnaamijyadu way isbadalayaan waqti kadib, laakiin wali waan nahay
baraya dadka iyaga maanta
La diyaariyey manhajka baaritaanka tamarta ee dugsiyada hoose.
1980-yadii: Kharashyada tamarta sare; xiisaha loo qabo ilaalinta; amaahda cashuuraha; tobankii sano ee dhibaatada qashinka.
Barnaamijka Tamarta Ganacsiga Yaryar
Tamarta Wareegga Tamarta
Barnaamijka Tababarka iyo Shaqada ee Berkshire
Barnaamijyada Maalgelinta Tamarta
Xarunta Dib-u-warshadaynta Qalabka Springfield
Telefishanka Helitaanka Dadweynaha
Aasaaska Sharciga Ilaalinta
Hawl wadeenada Barnaamijka Gobolka
Iskaashatada Saliida ee kululaynta CET
Barnaamijka tamarta ganacsiga yar yar wuxuu siiyay xoogaa qiimayntii ugu horaysay ee tamarta ganacsiyada si loo aqoonsado fursadaha lagu kordhinayo waxtarkooda tamarta.
Tamarta Circuit Rider waxay siisay adeegyo qorista deeqaha degmooyinka si ay u codsadaan maalgelin lagu rakibo tallaabooyinka ilaalinta tamarta.
BTEP - Barnaamijka Tababarka iyo Shaqada ee Berkshire - ayaa la qabtay
tababarka cimilada ee dhalinyarada shaqo la'aanta ah.
Barnaamijyada maalgelinta tamarta ee waxtarka iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo:
Bangiga Solar - wuxuu maamuley 0% barnaamij deyn ah oo qorey maamulaha isla markaana siinaaya eber maalgashi dulsaar dadka deegaanka si ay u rakibaan nidaamyada biyaha kulul ee qoraxda.
Barnaamijka Deyrta Heat - wuxuu gacan ka geystey maamulida mid ka mid ah barnaamijyadii ugu horreeyey ee maalgelinta si looga caawiyo dadka deggan inay rakibaan hagaajinta tamarta qorraxda iyo tamarta
Tobannaan sano, barnaamijyada amaahda HEAT iyo Solar Loan iyo kuwa la midka ahba waxay ka caawiyeen malaayiin dad ah dalka oo dhan
Adeegyada la balaariyay ee ay ka mid yihiin maareynta qashinka iyo dib u warshadeynta, oo ay ku jiraan la shaqeynta magaalooyinka si loo meel mariyo sharciyada dib u warshadaynta khasabka ah si ay ugu biiraan Xarunta Deegaanka ee Dib-u-warshadaynta Qalabka 'Springfield Material' (MRF)
The Springfield MRF wali waa midka kaliya ee gaarka loo leeyahay
iskaashi la mid ah sida Massachusetts
Lagu qabtay wacyigalinta bulshada ee ku saabsan waxyaabaha la sameeyo iyo waxyaabaha aan dib loo isticmaalin ee shirarka bulshada ee telefishanka marinka bulshada.
Waxay ku biirtay Aasaaska Sharciga dhowrista iyo kooxaha kale ee tamarta iyo bey'adda si looga dacwoodo shirkadaha korontada si ay u gaarsiiyaan
barnaamijyada ilaalinta iyo hufnaanta.
Kaqeyb qaatay shabakada Howl wadeenada Barnaamijka Gobolka si loo siiyo barnaamijyada tamarta bulshada galbeedka Massachusetts:
Dadaalladan bilowga ah iyo kuwa la midka ahba waxay gacan ka geysteen gogol xaaridda barnaamijka maanta ee Bulshooyinka Cagaaran ee gobolka oo dhan iyo horumarinta guddiyada mutadawiciinta waarta iyo shaqaalaha magaalooyin badan.
Xafiis laga furay Northampton si uu sifiican ugu adeego
afar degmo galbeedka Massachusetts.
Waxay daahfureen iskaashatada saliida kululeynta CET si ay u bixiso qiimeyn iyo adeeg tayo leh oo ay weheliso macluumaad ku saabsan waxtarka tamarta iyo
barnaamijyada tamarta la cusboonaysiin karo:
CET aakhirkii waa joojisay barnaamijkan iyadoo loo door bidayo mid kale
alaabada iyo adeegyada tamarta la cusboonaysiin karo
1990s - Barnaamijyada waxtarka tamarta korantada ayaa koray; dhiirrigelinta canshuurta qorraxda ee federaalka ayaa la waayey; dib-u-habeyn koronto ayaa dhacday; dib u warshadeynta degmada
Iskaashatada Dib-u-warshadaynta Ganacsiga Pittsfield
Barnaamijka Waxtarka Tamarta aan macaash doonka ahayn
Balaadhinta Barnaamijyada Waxbarashada Deegaanka
Aqoon-isweydaarsiyo DIY ah
Barnaamijka Qaybinta Compost Bin
Isbedelka Cimilada iyo Kulamada Tamarta Cusboonaysiinta
Qashinka Khatarta Ah Ee Qoyska
Bacriminta Qashinka Wasakhda Ganacsiga
Horumarinta Greylock Glen
Wuxuu bilaabay Iskaashatada Dib-u-warshadaynta Ganacsiga ee Pittsfield sanadkii 1997
inaad waraaqaha xafiiska ka ururiso ganacsiyada yaryar:
Dadaalladeenna iyo kuwa kale ee la mid ah waxay naga caawiyeen dhiirrigelinta kuwa wax soo roga ee dib-u-warshadaynta gaarka loo leeyahay
iyo shirkadaha goos gooska ah ee suuqa soo galaya.
La qabtay barnaamijka waxtarka tamarta aan faa'iido doonka ahayn kaas oo bixiyay qiimeyn xagga tamarta ah isla markaana ka caawiyay kuwa aan macaash doonka ahayn inay codsadaan maalgelinta lagu rakibo tallaabooyinka.
Balaadhinta barnaamijyada waxbarashada deegaanka oo ay kujiraan wadahadalo fiidiyow oo isdhaxgal ah, Berkshire Junior Solar Sprint oo uguhoreysa, barnaamijka dib udejinta iskuulka ee REAPS, iyo barnaamijka Earth Stewards barnaamijka dugsiga kadib
Aasaasay Qalabka Is-weydaarsiga - mid ka mid ah websaydhkii ugu horreeyay
qalabka isweydaarsiga goobaha ganacsiga:
Tani waxay ahayd kahor E-Bay, Freecycle, liiska Craig iyo kuwa kale oo dhan
agabyada waaweyn ee qadka tooska ah waxay dib u isticmaalaan meelihii aan maanta joogno
Aqoon isweydaarsiyo lagu qabtay nalalka ku shaqeeya tamarta, is-naftaada u samee
dahaadhka daaqada iyo bacriminta daarada.
Waxay abuurtay barnaamijkii ugu horreeyay ee tijaabinta qashin-qubka kombiyuutarka guryaha lagu iibiyo, kaasoo lagu iibiyo qashinka bacriminta oo ka samaysan caag dib loo warshadeeyay oo lagu ururiyey Massachusetts
Duuliyahaan wuxuu horseed u ahaa barnaamijka qalabka gobolka ee mustaqbalka ee loogu talagalay dawladaha hoose oo ilaa maanta socda
Qabtay fadhiyo macluumaad ah oo ku saabsan isbeddelka cimilada iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo.
Abaabulan Maalmaha ururinta Qashinka Khatarta ah.
Waxay abuurtay barnaamijyo tijaabo ah oo ugu horreeyay ee lagu nafaqeeyo qashinka cuntada
dukaammada waaweyn iyo maqaayadaha beeraha ku yaal.
Bixiyay barnaamij radon iyo barnaamij yareyn ah.
Soosaaray naqshad horumarineed oo waara oo loogu talagalay Magaalada
Adams iyo soo jeedinta horumarka Greylock Glen.
2000-yadii: Qaarkood waxay kordhiyeen wacyiga bulshada ee ku saabsan isbedelka cimilada; MA Xeerka Xalalka Kulaylinta Caalamiga ah iyo Xeerka Bulshooyinka Cagaaran ayaa dhaqan galay, MA waxay noqotay hogaamiye qaran ee maalgashiga waxtarka iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo; Mass DEP waxay balaarisay barnaamijyada mamnuuca qashinka / dib u warshadeynta.
Hogaamiyaha Dhismaha Wacyigelinta Macaamiisha
Kaalintii La Ballaadhiyay ee Waxtarka Tamarta
Adeegyada Qashinka iyo Adeegyada Dib-u-warshadaynta oo la ballaariyay
Dib U Soo Celinta Xarunta hagaajinta guriga
Dhismaha Adeegyada Dhismaha Dhismaha
CET waxay noqotay hogaamiye Massachusetts dhisida wacyiga macaamiisha, aqbalida iyo dalabka waxtarka tamarta iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo:
Waxay ka caawisay wax ka qabashada caqabadaha hore ee qaadashada PV ee ururada aan macaash doonka ahayn iyo dawladaha hoose iyada oo lagu rakibay qalab badan isla markaana la kaashanay qaar ka mid ah noocyadii lahaanshaha koox saddexaad
Waxay isugu yeertay Iskaashiga Tamarta Cusboonaysiinta Berkshire
Bixi aqoon isweydaarsiyo macluumaad iyo fagaarayaasha dadweynaha, loo qoro oo la dhiirrigeliyo kaqeybgalayaasha booqashada sanadlaha ah ee Dhismaha Green House
Isku-dubbaridka iyo socodsiinta socdaallada tamarta dabaysha
Iyadoo lala kaashanayo Alliance Green Consumers Alliance, ayaa ka diiwaangashan 1,500 qoys oo ku nool New England GreenStart koronto la cusboonaysiin karo
Magaalooyinka laga caawiyay waxay kasbadaan in kabadan $ 500,000 oo ah iswaafajinta lacagaha iyo deeqaha si loo hirgaliyo mashaariicda tamarta nadiifka ah ee deegaanka. Dadaalkani wuxuu sidoo kale gacan ka gaystay maalgalinta qaar ka mid ah shaqaalihii waara ee ugu horeeyay ee dawlada hoose
Adeegyada Hawlaha Cimilada Cimilada ee la aasaasay: Waxaa lagu qabtay aqoon isweydaarsiyo “Greening Your Community” oo loogu talagalay bulshada ku nool dhammaan galbeedka Massachusetts
Ka caawi dawladaha iyo muwaadiniinta tamarta iyo guddiyada waxqabadka cimilada dejinta yoolalka iyo istaraatiijiyadaha iyo sameynta wacyigelin. Maanta bulshooyin badan ayaa leh shaqaale iyo / ama mutadawiciin la shaqeeya kuwa kale ee ka socda gobolka iyo gobolka
si ay u qabtaan shaqadan muhiimka ah
Bulshooyinka laga caawiyay inay gaaraan magacaabista Beesha Cagaaran oo ay ka mid yihiin
gudbinta lambarka tamarta fidinta
Doorka la ballaariyay ee gaarsiinta waxtarka tamarta hoyga iyo ganacsiga:
Qiimaynta tamarta lagu qabtay kumanaan qoys
shirkadaha gaaska iyo korontada ee deegaanka
Qandaraasle la siiyay oo diyaarinaya iyo daboolida hawada iyo hubinta tayada si looga caawiyo milkiilayaasha guryaha inay hirgeliyaan tallaabooyinka keydinta tamarta. Ugu dambayntii annaga iyo kuwa kaleba waxaan awoodnay inaan gacan ka geysano horumarinta warshadaha ku filan in dabayshu ay noqon karto
waxaa bixiya qandaraasleyaasha dahaarka maxalliga ah
Lagu sameeyay qiimeyn xagga tamarta ah boqolaal ganacsi iyo degmooyin iyadoo loo marayo koronto iyo barnaamijyo ay maalgeliso gobolka
Bilaabay oo balaadhiyay adeegyada Dhisida Waxqabadka Sare waxayna soo bandhigtay ENERGY STAR oo loogu talagalay Guryaha iyo barnaamijyada LEED ee Guryaha Green House ee Maraykanka.
La abuuray lana bilaabay xoogaa tamarta ugu horreysa
barnaamijyada dhismayaasha qoysaska badan
Wuxuu xubin ka ahaa aasaasayaashii EarthShare New England, oo ay ku midoobeen ururada deegaanka iyo dhowrista deegaanka
Adeegyada qashinka iyo dib u warshadaynta oo la balaariyay, oo ay ka mid yihiin
bacriminta iyo yareynta isticmaalka sunta:
Adeegyada dib u warshadaynta waraaqaha oo lagu kordhiyay waqooyiga Berkshire County;
bilaabay inuu bixiyo dukumiinti burburin / gooyn
Dadka deegaanka ayaa laga caawiyay inay yareeyaan adeegsiga walxaha sunta ah ee ka jira gudaha iyo hareeraha guryahooda iyo dadka wax bartay iyo ganacsiyada waxyeellada sunta ah ee
meerkuri ku saabsan caafimaadka dadka iyo deegaanka labadaba
Waxay horumariyeen oo ay hirgeliyeen dadaal tijaabo ah si looga caawiyo ganacsiyada galbeedka Massachusetts inay dib u warshadeeyaan laambadaha ku shaqeeya meerkurida
Waxaa la bilaabay lana balaariyey barnaamijyada yareynta meerkuriga ee xarumaha qashinka-u-tamarta oo ay ku jiraan ka soo aruurinta xarumaha caafimaadka
Waxay ka caawiyeen iskuulada iyo ganacsiyada inay sameystaan ​​noolaha
barnaamijyada ururinta iyo nafaqeynta
Waxaa la abuuray oo la abaabulay shirarkii sanadlaha ahaa ee ugu dambeeyay ee Massachusetts ee warshadaha iyo dowladda. Shaqadani waxay gacan ka gaysatay u gogol xaadhitaanka ugu dambaynta mamnuucista qashinka-wasakhda ee Massachusetts iyo gobollada kale, iyo himilada yareynta qashinka cuntada
La daabacay qaar ka mid ah daraasadihii leexsashada cuntada ee ugu horreeyay iyo qalab-gacmeedyada, oo ay ku jiraan "Dhisidda Nidaam Suuq ku saleysan oo loogu talagalay Isugeynta Beerta Beeraha ee Qashinka Cunnada Beeraha," iyo "Qalabka Makhaayadaha Qashinka ee Wasakhda Cuntada"
Hormariyey Adeegyadaada Ganacsi iyo aqoon isweydaarsiyo
Waxaa Laga Furay Xarunta Dib U Soo Celinta Guryaha
(hadda EcoBuilding Gorgortanka) ee Springfield 2001:
Tani waxay ahayd mid ka mid ah dukaammadii ugu horreeyay ee nooceeda ah ee dalka ka jira waxayna gacan ka geysatay beddelidda fikradaha iyo qaababka la xiriira dib-u-isticmaalka qalabka dhismaha
Bilaabay adeegyo dib u dhis dhisme tijaabo ah:
Tiro sii kordheysa oo qandaraaslayaal ah ayaa hadda bixiya adeegyo dib u dhis ah
Waxaan gacan ka geysatey bilaabida barnaamijka 'AmeriCorps * VISTA Recycle for Gold' iyo
martigeli wadar ahaan 25 xubnood sanado badan.
Waxay bixiyeen macluumaad iyo adeegyo farsamo oo loogu talagalay beeraha si loo yareeyo kharashka iyadoo loo marayo waxtarka tamarta loona kordhiyo isticmaalkooda tamarta la cusboonaysiin karo:
Tamarta la Qabtay iyo Mashruuca Joogtaynta Beeraha Yaryar oo maalgalin ka heshay deeqda waxbarasho ee beeraha waara (SARE)
Lagu qabtay safarro-beeraha si loo muujiyo tusaalooyinka nalalka tamarta ku shaqeeya, qaboojiyaha, iyo qalabka caanaha iyo tamarta la cusboonaysiin karo ee bamgareynta biyaha, waraabka, iyo baahiyaha kale ee korantada.
Waxay qabatay fadhiga macluumaadka dheef-shiidka methane waxayna fududeysay daraasad suuragalnimada dheef-shiid kiimikaadka jirka si loo soo saaro koronto laba beerood oo aag ah
Waxaa loo rakibay PV qoraxda si ay u xoojiso qaboojiyaha iyo waraabka beeraha iyadoo maalgelin laga helayo Iskaashiga Teknolojiyadda Massachusetts iyo Waaxda Tamarta ee Mareykanka.
2010-hadda: Wacyiga koraya ee isbedelka cimilada; yoolalka tamarta gobolka ayaa cirka isku shareeray; cunnada la khasaariyey waxay noqotey arrin weyn oo gobol iyo qaran ah; dib-u-adeegsiga ayaa noqda mid casri ah; CET waxay maraysaa fidinta gobolka iyo gobolka oo dhan
Gorgortanka EcoBuilding-ka oo la ballaariyay
Goob Cusub Oo La Bedelay
Dhisida Tababarka Sayniska
Barnaamijyada Waxqabadka Deganaanshaha ee Ballaarinta
Xerada Kabaha Cimilada
RecyclingWorks MA Ayaa La Bilaabay
Barnaamijka Kooxda Cagaaran
CET EcoFellowship ayaa la bilaabay
Barnaamijyadii Ganacsiga Oo La Kordhiyay
Barnaamijyada Yaraynta Mercury
Dejinta Himilada iyo Raadinta
Bilaabay Xalinta Cuntada Qashinka
Boston Zero Waste iyo Harvard Food Waste Ban
Barnaamijka Solar Helitaanka
Barnaamijka Guryaha Caafimaadka leh
Barnaamijka Biyaha kulul ee Solar
Guriga Dadban iyo Tamarta Zero
Waxqabadka Sare ee Mashaariicda Qoysaska
Gorgortanka EcoBuilding wuxuu ku fiday xarun aad u ballaadhan si uu u noqdo dukaanka ugu weyn ee noociisa ah ee ku yaal New England.
Dib-u-habeyn tamar oo qoto dheer oo ka socota goobta cusub ayaa u beddelay qaab-dhismeedka 100-sano jir dhisme cagaaran oo leh waxqabad sare oo leh fasal dadweyne.
Kaalinta la ballaariyay ee ku saabsan dhismaha tababarka sayniska iyo horumarinta manhajka:
Kormeerayaasha dhismaha ee aqoonta leh iyo xirfadleyda ku saabsan lambarka tamarta Gobolka iyo barnaamijyada dhismaha cagaaran ee la deggan yahay si loo kordhiyo tamarta
waxtarka dhismaha cusub
La horumariyey lana baray dariiqyada ka baxa casharrada tababarka shaqada ee Saboolnimada
Waxaa la soo saaray Manhajka MassGreen ee loogu talagalay isticmaalka kuliyadaha bulshada gobolka oo dhan
Ballaarinta barnaamijyada waxtarka tamarta deegaanka
bixinta iyo heerarka wax soo saarka.
Wada shaqeynta Xerada Bootada ee cimilada si loo balaariyo tirada iyo khibrada qandaraaslayaasha cimilada guryaha.
Abaalmarinta ku guuleysiga barnaamijka 'RecyclingWorks MA' ee gobolka oo dhan ayaa la bilaabay lana ballaariyay.
Barnaamijka Tamarta Beerta Mass oo dhan ayaa la ballaariyay si looga caawiyo beeraha waxtarka tamarta iyo mashaariicda tamarta la cusboonaysiin karo
Kooxda Green Team barnaamijka waxbarashada dhimista qashinka ayaa la ballaariyay.
CET EcoFellowship ayaa la bilaabay si loo caawiyo horumarinta berrito hoggaamiyeyaasha deegaanka:
Shaqaalaheenna 'EcoFellows' waxay u gudbeen jagooyinka mas'uuliyadda sii kordheysa ee CET, Midowga Seynisyahannada Walaacsan, CERES, NESEA, Smith College,
Boeing, Schneider Electric iyo inbadan
Barnaamijyada waxtarka tamarta ganacsiga iyo kuwa yaryar ayaa ku fiday gobolka oo dhan.
Waxay bilaabeen oo balaariyeen barnaamijyada yareynta meerkuriga ee warshadaha heerkulka guud ahaan waqooyi-bari iyo wixii ka dambeeya.
Waxaa la diyaariyey qorshayaal mashruuc tijaabo qoraxda bulshada ah.
Hadafka hadafku wuxuu bilaabay dejinta yoolka iyo raadinta oo ay kujirto saameynta dhimista kaarboonka si wax looga qabto isbedelka cimilada.
Waxaa la bilaabay adeegii xalka cuntada ee la qasaaray iyo balaarinta gobolada / heer qaran ee dadaallada cuntada ee khasaaray.
Wada-abuurey Boston Zero Waste Plan iyo Sharciga Cuntada ee Harvard iyo Buugga Siyaasadda ee Xannibaadda Qashinka Qashinka.
Waxaa la daahfuray barnaamijka tijaabada Solar Access ee guryaha dadka dakhligoodu dhexdhexaadka yahay.
Waxaa la bilaabay barnaamij tijaabo ah oo loogu tala galay bukaanka cudurka neefta iyo COPD.
Waxay abuurtay oo hirgalisay barnaamij tijaabo biyo kulul oo Solar ah oo heer gobol ah.
Ku darid Guryo Dadban iyo Zero Energy ayaa ku soo dhowaanaya
Adeegyada Waxqabadka Sare.
Waxay u adeegtay tiro sii kordheysa oo ah waxqabad sare oo mashaariic dhisme oo qoysaska badan awoodi kara.
1990-yadii: Barnaamijyada waxtarka tamarta korantada ayaa koray; dhiirrigelinta canshuurta qorraxda ee federaalka ayaa la waayey; dib-u-habeyn koronto ayaa dhacday; dib u warshadeynta degmada
2010-hadda: Wacyiga koraya ee isbedelka cimilada; yoolalka tamarta gobolka ayaa cirka isku shareeray; cunnada la khasaariyey waxay noqoneysaa arrin weyn oo heer gobol iyo heer qaran ah; dib-u-adeegsiga ayaa noqda mid casri ah; CET waxay maraysaa fidinta gobolka iyo gobolka oo dhan.
Ashley Muspratt - Madaxweyne
Ashley Muspratt, Madaxweyne, waxay ku biirtay CET 2018. Doorkeedii hore ee Agaasimaha Hal-abuurka, Ashley waxay hormuud ka ahayd adeegyada kaarboonaynta ee dhisidda novel, xalalka cuntada ee khasaaray, iyo maalgelinta fursadaha macaamiisha iyo la-hawlgalayaasha. Waxay waayo-aragnimo ballaadhan u leedahay barnaamijka cuntada khasaaray ee hay'addu hormuudka ka tahay, dhisidda kaarboonaynta, iyo dhisidda. Ashley waxay la wareegtay doorka madaxweynaha 2022, iyo maadaama hogaamiyaha CET uu si qoto dheer ugu hawlan yahay qorsheynta istaraatiijiyadeed, hirgelinta kala duwanaanshaha, sinnaanta, iyo hindisayaasha ka mid noqoshada, iyo ballaarinta ballaadhka iyo waxtarka barnaamijyada iyada oo loo marayo hawlgallada, isgaarsiinta, iyo lacag ururinta.
Ashley waxay haysataa rikoodh dheer oo hogaamiye iyo hal-abuure ahaan. Kahor inta aysan ku biirin CET, waxay aasaastay oo ay hogaamisay bilawga wasakhda-tamareed ee ka hooseeya Saxaraha Afrika, taas oo u beddeshay saxarada saxarada bini'aadamka shidaalka warshadaha. Maal-gashadayaasha shirkadda waxaa ka mid ahaa Gates Foundation, USAID, iyo hay'adda horumarinta Faransiiska oo si weyn loogu aqoonsaday inay dib u soo nooleeyaan dhaqaalaha nadaafadda magaalooyinka ee wadamada dhaqaalahoodu hooseeyo.
Ashley waxa uu MS ku haystaa Injineernimada Deegaanka iyo PhD xagga Tamarta iyo Kheyraadka ee Jaamacadda California, Berkeley.
Christina Bicksler, Sarkaalka Sare ee Hawlgallada, waxay ku biirtay CET 2021 iyada oo xubin ka ah Kooxda Hal-abuurka ah ee keenaya xalalka kaarboonaynta mawduucyo badan oo ay ka mid yihiin qashinka, tamarta, iyo xisaabinta kaarboonka. COO ahaan, Christina waxay diiradda saartaa sidii loo heli lahaa wax-ku-oolnimo iyo raadinta fursadaha hal-abuurnimo iyo horumarinta habka. Habkeeda waxaa ka mid ah ka faa'iidaysiga tignoolajiyada si loo habeeyo hababka hawlgalka, kobcinta aqoonta wadaagga, iyo kor u qaadida wada shaqaynta ka dhaxaysa kooxaha is-abaabulaya ee isdhaafsiga ah. Waxay u tarjumeysaa shuruudaha shaqada iyo kuwa hawlgelinta ee hababka dhaqanka ugu wanaagsan ee lagu heshiiyey xalal macno leh oo ka caawinaya in kooxuhu u horseedaan himilooyinkooda, oo ay la xidhiidhaan oo ay xaqiijiyaan xeeladaha, hababka, iyo go'aamada ururka oo dhan si ay u taageeraan bixinta adeegga iyo dardargelinta saamaynta hadafka.
Christina waxay ku jirtay warshadaha la-talinta deegaanka in ka badan 25 sano, taasoo keentay kooxo iskudhaf ah iyo hawlgallo waaxyo badan si ay u bixiyaan sayniska, injineernimada, iyo xalalka tignoolajiyada ee macaamiisha kala duwan ee Maraykanka iyo Australia, oo ay ku jiraan tamarta, saliidda iyo gaasta , macdanta, ganacsiga, waxbarashada, difaaca, iyo dawladda hoose, dawlad goboleedyada iyo federaalka. Christina waxay BS ku leedahay Geology-ga Jaamacadda James Madison waxayna baratay Nidaamyada Macluumaadka Juqraafiyeed ee Jaamacadda Denver iyo horumarinta hoggaanka Jaamacadda New South Wales, Dugsiga Ganacsiga ee Australia. Iyadu waa Xirfadle Maareynta Mashruuca (PMP) oo la shahaadeysan waana khabiir Geologist shati haysta (PG).
Lorenzo Macaluso - Madaxa Koritaanka
wuxuu fureyaa feylka IMAGE Lorenzo Macaluso, Sarkaalka Sare ee Kobaca, wuxuu ka soo shaqeeyay Xarunta EcoTechnology (CET) tan iyo 2000 waana khabiir heer qaran ah oo ku saabsan hababka dhimista qashinka ganacsiga iyo xalalka waxtarka tamarta ganacsiga. Waxa uu la shaqeeyaa dawladda, aasaaska, iyo la-hawlgalayaasha warshadaha si ay u horumariyaan xalal weecinta abaal-marin si ay u caawiyaan ganacsiyada iyo hay'adaha yaraynta qashinka, badbaadiyo tamarta, iyo hagaajinta waxqabadka deegaanka. Wuxuu ka shaqeeyaa guddi-hoosaadka MassDEP Organics wuxuuna ku soo bandhigay shirar dowladeed iyo kuwo qaran oo badan sida khabiirka horumarinta kaabayaasha dhimista qashinka. Wuxuu nashqadeeyay oo uu ka fuliyay barnaamijyo kala duwan oo deegaanka ah oo dhan Waqooyi Bari, wuxuuna la tashaday qaar kale oo badan oo heer qaran ah.
Wuxuu la joogay Xarunta EcoTechnology ilaa 2000, wuxuuna soo saaray qalab loogu talagalay maqaayadaha iyo iskuulada danaynaya inay yagleelaan barnaamijyada nafaqeynta wuxuuna soo saaray kaabayaasha dib u warshadaynta laambadda gobolka oo dhan. Wuxuu gacan ka gaystay horumarinta iyo kormeerka Adeegyada Ganacsiga Cagaaran ee CET, isagoo siinaya weecinta qashinka iyo macluumaadka hufnaanta tamarta iyo caawimaad farsamo ganacsiyo kaladuwan oo ku baahsan Massachusetts iyo koonfurta New England.
Waxa uu shaqadiisa ka bilaabay Jaamacadda Massachusetts Xafiiska Maareynta Qashinka ee 1997. Lorenzo waxa ay haysataa Masters of Public Health oo diiradda saaraysa caafimaadka deegaanka, iyo Bachelor of Science ee Maareynta Kheyraadka Dabiiciga ah; Labada shahaado waxay ka socdaan Jaamacadda Massachusetts, Amherst.
Lisa Dufour - Agaasimaha Shaqaalaha
wuxuu fureyaa feylka IMAGE Lisa Dufour waxay timid CET sanadkii 2014 iyadoo in kabadan 15 sano khibrad uleh shaqaalaha
maaraynta iyo ka mid noqoshada kooxda hoggaanka sanadkii 2016. CET waxay aqoonsan tahay in hantidooda ugu weyn ay tahay aqoonta, xirfadaha iyo xiisaha shaqaalaheeda: shaqaalaha maalin kasta u shaqeeya si ay u gutaan himilada CET ee ku aaddan dhinacyada, bixinta barnaamijyada iyo adeegga macaamiisha, iyo noocyo kala duwan adeegyada taageerada. Lisa waxaa ka go'an inay gacan ka geysato horumarinta iyo hirgelinta nidaamyo u oggolaanaya shaqaalaha CET inay ku guuleystaan ​​maaddaama ay qabanayaan shaqadooda muhiimka ah.
Kheyraadka aadanaha waxaa ka mid ah maareynta manfacyada, tababarka, horumarka, maareynta waxqabadka, iyo u hoggaansanaanta nidaamka. Kuwaas waxaa u dheer, Lisa waxay kaloo kormeertaa barnaamijka badbaadada CET, tas-hiilaadka, iyo raxan raxan. Tababbarkeeda iyo khibradeeda waxaa ka mid ah maareynta isku dhaca, Xiriirka aan rabshadaha lahayn, maareynta isbedelka, iyo qorsheynta istiraatiijiyadeed. Waxay leedahay Masters ee Taariikhda Farshaxanka iyo Anthropology halkaas oo ay ka baartay xiriirka qaababka muuqaalka iyo horumarka bulshada.
Agaasimaha Khayraadka Shaqaalaha
Kim Garvey - Agaasimaha Maaliyadda & Adeegyada Warfaafinta
wuxuu fureyaa feylka IMAGE Kim Garvey waa Agaasimaha Dhaqaalaha iyo Adeegyada Macluumaadka ee Xarunta EcoTechnology. Waxay mas'uul ka tahay howlaha maaliyadeed ee CET oo ay ku jiraan maareynta lacagta caddaanka ah ee muddada-dhow iyo muddada-dheer, xisaabaadka la qaadan karo iyo kuwa la bixin karo, iyo hannaanka horumarinta miisaaniyadda iyo warbixinta. Waxay sidoo kale hagtaa horumarinta iyo hirgelinta tikniyoolajiyada macluumaadka waqtiga iyo ku habboon iyo nidaamyada macluumaadka / xogta.
Kahor intaysan ku biirin CET-da 2018, waxay la shaqeysay seddex iyo labaatan sano shirkado kala duwan oo ay ka mid yihiin injineeriyada cilmiga biomediga, bilowga iyo kooxaha makhaayadaha. Muddadaas, waxay si joogto ah u kordhisay khibradeeda maaraynta shaqaalaha, miisaaniyadda, xisaabinta, xakamaynta agabka, saadaalinta, falanqaynta dhaqaalaha, iyo maaraynta mashruuca. Waxay haysataa shahaadada Bachelor-ka ee Suuqgeynta iyo Master of Science ee Xisaabaadka Jaamacadda Western New England.
Agaasimaha Maaliyadda & Adeegyada Warfaafinta
Emily Susan Gaylord - Agaasimaha Isgaarsiinta & Hawlgelinta
wuxuu fureyaa feylka IMAGE Emily Susan Gaylord waxay ku hagtaa dadaallada ka-qaybgalka bulshada ee CET iyada oo loo marayo suuq-geynta, wacyigelinta bulshada, iyo horumarka. Emily waxay sidoo kale hagtaa barnaamijka tartanka ee EcoFellowship, oo ah barnaamij wada shaqeyn oo soconaya 11 bilood kaas oo siiya xirfadlayaasha deegaanka ee soo koraya fursad ay ku taageeraan dadaallada kala duwan ee CET. Emily waxay leedahay dareen ah samaynta cagaar macno samaynaysa, waxayna ku raaxeysataa isku xirnaanta dadka iyo ganacsiyada himilada CET.
Emily waxay u keentaa CET khibrad fara badan, iyadoo ka shaqeysay isgaarsiinta aan faa'iido doonka ahayn ee gobolka oo dhan. Emily waxay shahaadada BA ku qaadatay Maamulka aan macaash doonka ahayn ee Jaamacadda Massachusetts, Amherst.
Agaasimaha Isgaarsiinta & Hawlgelinta
Lisa Kohler - Agaasimaha Barnaamijka iyo Hawlgallada Farsamada
wuxuu fureyaa feylka IMAGE Lisa Kohler waxay ku biirtay CET 2006. Waxay leedahay masuuliyada kormeerida iyo horumarinta istaraatiijiyada iyo hirgalinta howlaha barnaamijyada iyo adeegyada farsamada ee CET. Iyadoo si dhow ula shaqeyneysa kooxdeeda, waxay hubisaa in shuruudaha barnaamijka iyo yoolalka ay la kulmaan iyadoo diirada la saarayo adeegga macaamiisha iyo tayada sare. Waxay leedahay khibrad ballaaran oo ku saabsan waxtarka tamarta iyo yareynta qashinka - maareynta, tababarka iyo toosinta shaqaalaha maamulka, adeegga macaamiisha iyo mas'uuliyadaha farsamo, iyo sidoo kale horumarinta iyo hirgelinta adeegyada iyo barnaamijyada wax soo saarka iyo mashaariicda ku saleysan mashruucyada. Waxay haysataa BA ee cilmiga Anthropology ee Jaamacadda Massachusetts Amherst.
Agaasimaha Barnaamijka iyo Hawlgallada Farsamada
Jae McAuley - Agaasimaha Hawlgallada
Jae waa Agaasimaha Hawlaha Xarunta EcoTechnology. Jae wuxuu mas'uul ka yahay guud ahaan hoggaaminta, horumarinta iyo hirgelinta barnaamijyada iyo hawlgallada CET. Tilmaamteeda, CET waxay u soo baxday hogaamiye warshadeed horumarinta iyo hirgelinta barnaamijyada waxtarka tamarta ee ku saleysan korontada iyo adeegyada la talinta dhismaha waxqabadka sare. Jae wuxuu kaloo ka ciyaaraa door muhiim ah hogaaminta barnaamijyada leexinta qashinka ee CET oo ay kujiraan dukaamada alaabada dhismaha ee tafaariiqda la isticmaalay.
Jae wuxuu aaminsan yahay in ganacsigu yahay furaha muhiimka u ah joogtaynta deegaanka. Waxay 10-kii sano ee la soo dhaafay diiradda saartay geeddi-socodka iyo horumarinta adeegga ee waxqabadka sare. Waxay ka caawineysaa horumariyeyaasha, kuwa wax dhisaya iyo macaamiisha naqshadaha inay soo qabtaan qiimaha ganacsiga ee dhaqamada joogtada ah ee dhismaha iyo meelaha ganacsiga. Jae wuxuu wax ku bartay Horumarinta Ururka ee Jaamacadda Massachusetts iyo Naqshadeynta Jaamacadda Koonfurta Florida.
Janet Warren, Guddoomiye
… Waa xirfadle hawlgab ah oo soddon sano oo khibrad ah u leh suuqgeynta, iibka, iyo horumarinta wax soo saarka waxaa ka mid ah inuu noqdo Agaasimaha Suuqgeynta ee Fazzi Associates, Madaxweyne Kuxigeenka Suuqgeynta ee Bangiga Monson Savings, Madaxweynaha shirkadeeda la talinta gaarka ah, MarCom Capital, iyo Madaxweyne kuxigeenka Labaad loogu talagalay Horumarinta Suuqa ee Phoenix Nolosha Guriga. Ka sokow kaalinteeda Guddiga CET, waxqabadyadeeda ka qayb qaadashada bulshada waxaa ka mid ahaa u adeegidda guddiga qorshaynta istiraatiijiyadeed ee ugu dambaysay ee Rugta Ganacsiga Weyn ee Northampton iyo xubin ka mid ah guddiga Rugta, Rugta Gobolka ee Degmada Hampshire, Dalxiiska Gobolka ee Gobolka Hampshire Golaha, iyo Wadada Midoobey ee Degmada Hampshire.
Nancy Nylen, Guddoomiye Ku-xigeen
… Waa la taliye madaxbanaan iyo aqoonyahan deegaanka ah, kuna takhasusay dhinacyada waxtarka tamarta, tamarta la cusboonaysiin karo, iyo dhowrista khayraadka. Waxay dhowaan ka fariisatay CET, halkaas oo ay ka shaqeynaysay in ka badan soddon sano barnaamijyo hal abuur leh oo diiradda saaraya xallinta maxalliga ah ee arrimaha tamarta ee ka faa'iideysanaya dhaqaalaha, deegaanka dabiiciga ah, iyo tayada nolosha ee xubnaha bulshada. Waxay shaqadeeda ka bilawday Qeybta Alaska ee Tamarta iyo Horumarinta Awoodda dabayaaqadii 1970-meeyadii waxayna u sii gudubtay inay u shaqeyso ururada aan dawliga ahayn ee gobolka iyo gobolka ee Washington State, New Mexico, iyo Massachusetts. Nancy waxay ka heshay BA ka Hampshire College iyo Masters of Education iyadoo xoogga la saarayo waxbarashada sayniska ee Jaamacadda Washington. Nancy waxay u adeegtaa Guddiga Agaasimayaasha Tamarta Xiriirka, Inc. waana xubin ka tirsan Golaha oo ka tirsan Hay'adda Williamstown Rural Lands Foundation.
Jennifer Marrapese, Khasnaji
… Waa xubin ka mid ah bulshada horeyna u ahayd Agaasimaha Adeegyada Goobidda ee Shaqaalaha United, halkaas oo ay diiradda saarto horumarinta ganacsiga iyo adeegyada raadinta ee bulshada aan macaash doonka ahayn ee Galbeedka Massachusetts iyo Connecticut, iyo raadinta fulinta qeybta xirfaddooda. Jennifer waxay keeneysaa ku dhowaad 10 sano oo waayo aragnimo ah saaxadda waarijinta, iyadoo soo qabatay dhawaan ugu dambeyn Agaasimaha Fulinta ee Ururka Tamarta Waarta ee Northeast (NESEA). Kahor inta aysan ku biirin NESEA, Jennifer waxay u shaqeysay Madaxweyne kuxigeenka Arimaha Dejinta ee Xiriirka Cox iyo xubin xubin kalkaaliye oo katirsan Xarunta Horumarinta Fulinta ee Jaamacada Bryant. Jennifer waxay leedahay JD oo ka socota Jaamacadda California, Berkeley, MA MA ee Maamulka Maamulka iyo Horumarinta ee Jaamacadda Fielding, iyo BA ee Saxaafadda ee Jaamacadda Wisconsin. Waxay u shaqeysaa Guddiga Maamulka ee Camp Howe iyo Deerfield, Golaha Dhaqanka ee MA, waxayna xubin hore ka ahayd guddiga Big Sisters of Rhode Island. Waxay la nooshahay qoyskeeda guri xoolo-xoojiye ah oo tamar-dib loo habeeyay oo ku yaal Koonfurta Deerfield, MA.
Member waa xubin bulshada ka mid ah horeyna u ahaan jirey Madaxweyne ku xigeen Sare Qorsheynta Nidaamka iyo Horumarinta Barnaamijka ee Nidaamka Caafimaadka Berkshire. Waxay sidoo kale u shaqeysay inay noqoto Sarkaalka Hawlaha Guud 1995 - 2001. Ka qeyb qaadashadeeda bulshada waxaa ka mid ah u adeegida Madaxweynaha Golaha Berkshire Tiyaatarka ee Golaha Ammaanada, iyo sidoo kale inay xubin ka tahay Berkshire Priorities iyo Pittsfield Promise, iyo Isgaarsiinta Shabakad Ganacsi oo aan Macaash doon ahayn Guddiga. Ms. Blodgett ayaa MBA ka qaadatay Jaamacadda Chicago.
A waa Wakiilka Sare ee Irene E. iyo George A. Davis Foundation iyo Madaxweynihii hore iyo Sarkaalka Howlgalka ee American Saw & Mfg. Company ee East Longmeadow, MA. Marka laga soo tago adeegiisa Davis Foundation, Steve Davis wuxuu leeyahay nolol shicib ah oo adag wuxuuna u adeegaa Aasaaska Bulshada ee Galbeedka Massachusetts, waa wakiil ka tirsan American International College, oo ah wakiilka 'Springfield Symphony' waana agaasimihii hore ee Horumarinta Dhaqaalaha Galbeedka Massachusetts. Golaha.
…waa xubin ka tirsan bulshada oo si firfircoon uga dhex muuqda bulshada deegaanka oo ku nool Pittsfield. Hadda waxay ka shaqeysaa guddiyada Nidaamyada Caafimaadka Berkshire iyo Kooxda Masraxa Berkshire waxayna u tahay Guddoomiyaha Komishanka Qaranka Mareykanka ee UNESCO. Waxay BA ka heshay UMass Amherst waana xaaska duqii hore ee Pittsfield Evan Dobelle.
Member waa xubin bulshada kamid ah oo dhowaan uqabtay kuxigeenka Maamulka & Adeegyada Shaqada ee Berkshire County Arc. BCArc waxay u adeegtaa 700 oo qof & qoysas naafo ah oo ku kala nool labada degmo ee Berkshire & Hampden. Wuxuu xubin ka yahay Dalada Shaqaalaynta, oo ah qorshe gobolka oo dhan ka socda Massachusetts Partnership for Transition to Employment (MPTE), oo hadafkiisu yahay kordhinta shaqada dadka naafada ah ee gobolka oo dhan. Wuxuu ahaa macalinka barashada laqabsiga PSIA ee Stride Adaptive Sports at Jiminy Peak mudo 17 sano ah.
… waxa ay shaqadeeda ka bilowday dhanka tamarta 2013 iyada oo ah CET EcoFellow Waxtarka Tamarta. Dhawaanahan, iyadu waa Maareeyaha Mashruuca ee Adeegyada Tamarta ee Icetec, bixiye xallinta tignoolajiyada kaas oo soo diraya in ka badan 200 MW jiilka la qaybiyey ee Waqooyi-bari iyo suuqyada tamarta ee Bartamaha-Atlantiga. Waxay sidoo kale ku sii waddaa doorkeeda Agaasimaha Hawlaha ee Suuqyada Grid Next, oo ah hormuudka MA-ku-saleysan beddelka iyo isku-darka shahaado tamar la cusboonaysiin karo, taas oo ay ku lug lahayd tan iyo aasaaska shirkadda 2017. Doorkeedii hore ee shirkadda la-talinta injineernimada deegaanka , waxay kala shaqeysay macaamiisha degmada iyo machadyada xagga tamarta iyo falanqaynta biilasha, qorshaynta sare ee tamarta iyo adkeysiga cimilada.
Heather waxay ka hawlgashaa bulshadeeda maxalliga ah, iyadoo u adeegta sidii Guddoomiye Guddi-hoosaadka Tamarta ee Guddiga Joogtada ee magaaladeeda. Dhammaan doorarkeeda oo dhan waxaa kaxeeya xiisaha joogtaynta iyo sahaminta siyaabaha ay shirkadaha iyo hay'adaha u yareyn karaan saameyntooda isbedelka cimilada. Waxay ku qaadatay shahaadada koowaad ee Sayniska ee Bayolojiga, oo ay la socoto fiirsashada Ecology, UMass Lowell ee 2013.
Madax waynaha CET ahaan, Ashley waxa kale oo ay u adeegtaa Guddida Maamulka. Tan iyo markii ay ku soo biirtay CET 2018, Ashley waxa ay hormood u noqotay adeegyada cusub ee kaarboonaynta, xalalka cuntada ee khasaaray, iyo maalgelinta fursadaha macaamiisha iyo la-hawlgalayaasha. Waxay waayo-aragnimo ballaadhan u leedahay barnaamijka cuntada khasaaray ee hay'addu hormuudka ka tahay, dhisidda kaarboonaynta, iyo dhisidda. Ashley waxay la wareegtay doorka madaxweynaha 2022, iyo maadaama hogaamiyaha CET uu si qoto dheer ugu hawlan yahay qorsheynta istaraatiijiyadeed, hirgelinta kala duwanaanshaha, sinnaanta, iyo hindisayaasha ka mid noqoshada, iyo ballaarinta ballaadhka iyo waxtarka barnaamijyada iyada oo loo marayo hawlgallada, isgaarsiinta, iyo lacag ururinta.
… Wuxuu in kabadan 25 sano kahaa jagooyinka farsamada iyo hogaaminta ugu horeyn warshadaha waraaqaha takhasuska sare leh. Steve wuxuu la joogay shirkadda Crane & Co., Inc. in ka badan 20 sano, oo uu ugu dambeeyay madaxweyne ku xigeen mas'uul ka ahaa soo saarista, injineernimada iyo adeegyada deegaanka. Waqtigan xaadirka ah wuxuu horumarinayaa warshaddii hore ee Crane & Co. Inc. ee ku taal Dalton, Mass., Iyadoo ujeedadu tahay abuuritaanka suuq loogu talagalay alaabada farshaxanka maxalliga ah iyo ganacsiyada waara. Steve wuxuu xilligan hayaa jagooyin guddi gudaha aagga Housatonic Valley, ee Mount Greylock Ski Club iyo Massachusetts Outdoor Heritage Foundation.
… Waa milkiilaha Boston Bay Consulting. Isaga oo ka duulaya khibrad 25 sano ah, wuxuu siiyaa adeegyo xiriir dawladeed, ganacsi iyo horumarinta mashruucyada, iyo kaalmada maareynta kuwa ka shaqeeya beeraha, kalluumeysiga, iyo nidaamyada cuntada. Wuxuu sidoo kale soo noqday Agaasimihii Gobolka USDA ee Horumarinta Reer Miyiga ee Connecticut, Massachusetts iyo Rhode Island iyo Agaasimaha Fulinta ee Guddiga Suuq-geynta Cranberry USA. Mudane Soares wuxuu shaqadiisa ka bilaabay Waaxda Massachusetts ee Kheyraadka Beeraha halkaas oo uu ka soo qabtay xilal kala duwan oo hogaamineed oo ay ka mid yihiin Maamulaha Barnaamijkii Biyo-abuurka ee ugu horreeyay ee Barwaaqo Sooranka isla markaana uu ku soo gabagabeeyay magacaabis gudoomiye Gobol oo ah Taliyaha Waaxda ee 2009. Halyeey ka tirsan Ciidanka Mareykanka, Mr. Soares wuxuu ka helay UMass Dartmouth cilmigiisa laba-geesoodka ah ee Biology iyo Marine Biology oo wuxuu dhameystiray shaqadii koorsada ee ku saabsan kalluunka iyo kalluumeysiga Jaamacadda Rhode Island.
Ma xiisaynaysaa inaad ku biirto guddidayada? Halkan riix si aad u ogaato wax badan.
La bilaabay 2015, Abaalmarinta Alan Silverstein iyo Laura Dubester ee Hogaaminta Deegaanka Beesha waxaa siiya Xarunta EcoTechnology muwaadin maxalli ah oo ka shaqeynaya beeshiisa ama beesheeda si ay uga faa'iideysato deegaanka maxalliga ah - iyadoo diirada la saarayo yareynta saameynta waxyeelada leh ee bini'aadamka ku leeyihiin deegaanka - iyo talaabooyinka wanaagsan ee dadku ku qaadi karaan guriga, shaqada iyo bulshadooda kuwaas oo gacan ka geysanaya ilaalinta deegaanka, hagaajinta caafimaadka bulshada iyo dhisidda bulshada.
Abaalmarinta waxaa lagu sharfayaa Alan iyo Laura, oo si wada jir ah u agaasimay Xarunta EcoTechnology muddo 30 sano ah. Waxay ka fariisteen jagooyinkoodii Agaasime ee 2010.
Alan iyo Laura waxay hormood ka ahaayeen dhaqdhaqaaqa deegaanka. Laga soo bilaabo 1977 ilaa 2010 waxay u shaqeeyeen si hagar la'aan ah abuurista iyo hirgelinta dadaallada badan ee ku saleysan bulshada ee ku-saleysan beel-ku-guuleysiga iyo dhiirrigelinta kuwa kale inay sidaas oo kale sameeyaan. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan taariikhda CET iyo waxyaabihii u qabsoomay.
Abaalmarinta ayaa lagu sharfayaa guulaha Alan iyo Laura ee CET, waxayna u keenaysaa aqoonsi shakhsiyaadka muujiya hoggaaminta bulshada iyo deegaanka iyada oo loo marayo aragtidooda, adkeysigooda, iskaashigooda, waxbarashada bulshada iyo guulaha ay gaareen.
Abaalmarinta Abaalmarinta 2022
Degdeg u baahi
Qofka lala xiriirayo: John Majercak, Xarunta Xarunta EcoTechnology, 413-586-7350 x228
Al Blake waxay heshaa Xarunta EcoTechnology's Abaalmarinta Hogaaminta Deegaanka
Al Blake waxa uu helay 2022 Alan Silverstein iyo Laura Dubester Abaalmarinta Hogaaminta Deegaanka ee Beesha
Pittsfield, MA - Al Blake of Becket wuxuu helay 2022 Alan Silverstein iyo Abaalmarinta Laura Dubester ee Hoggaanka Deegaanka Beesha ee Xarunta Cilmiga EcoTechnology (CET). Abaalmarinta waxaa loogu magac daray Silverstein iyo Dubester, kuwaas oo u soo shaqeeyay la- agaasimeyaal CET muddo tobanaan sano ah ilaa ay ka fariisteen 2010. Dubester wuxuu ku biiray CET 1977 iyo Silverstein 1978. Waxay noqdeen agaasimeyaal ka tirsan ururka 1988. Silverstein wuxuu ku dhintay 2014. Blake wuxuu bilaabay laanta NAACP Berkshire Cimilada/Guddiga Cadaalada Deegaanka.
"Waxaan u baahanahay hogaamiyayaasheena asaasiga ah oo Al uu tusaale u yahay," ayay tiri Laura Dubester oo abaal-marinteeda wadata. "Aragti togan, oo ay weheliso waxbarasho badan si dadka loo keeno, samirka iyo hindisaha ayaa ah qaar ka mid ah tayada hoggaanka Al."
Abaalmarinta waxaa siiya CET muwaadin ama koox maxalli ah oo ka shaqeyneysa beeshooda si ay uga faa'iideystaan ​​deegaanka maxalliga ah iyadoo diiradda la saarayo yareynta saameynta xun ee bani'aadamku ku yeelan karo deegaanka, iyo tallaabooyinka wanaagsan ee dadku ku qaadi karaan guriga, shaqeeyaan, iyo bulshadooda ka caawiya ilaalinta deegaanka, hagaajinta tayada nolosha, iyo dhisida bulshada.
"Al Blake waa hogaamiye bulsheed oo run ah oo ka shaqaynayay kor u qaadista wacyiga iyo dhiirigelinta dadka si ay u qaadaan tallaabooyin wax ku ool ah si loo ilaaliyo deegaankeena, heer deegaan iyo meelo ka baxsan," ayuu yiri madaxa CET John Majercak. "Waxaan aaminsanahay sida ugu wanaagsan ee lagu sharfo shaqada Alan iyo Laura inay tahay in la aqoonsado shaqada iyo ka go'naanta dadka kale ee cajiibka ah sida Al."
Blake waxa uu leeyahay rikoodh cajiib ah oo dhinaca bulshada ah, maamulka deegaanka. Wuxuu ka caawiyay inuu bilaabo cutubka 350Mass - Berkshires kaasoo socday siddeed sano. Cutubku wuxuu ka mid ahaa 350 Massachusetts ee Mashruuca Mustaqbal Wanaagsan, Shabakad ay xubno ka yihiin xubno u dhaqdhaqaaqa cimilada. Waxa kale oo uu xubin ka yahay 350Mass-ka ee gobolka oo dhan. Blake wuxuu sidoo kale ahaa aasaasaha Guddiga Tamarta Becket ee 2016 kaas oo uu guddoomiyey muddo lix sano ah. Intaa waxaa dheer, Blake waxa uu fududeeyay Madasha Tamarta ee sannadlaha ah ee maxalliga ah iyo sidoo kale shirar iyo goleyaal lala yeesho sharci-dejiyeyaasha Berkshire si loo horumariyo wacyiga cimilada iyo sharciga.
In ka badan 45 sano, Xarunta EcoTechnology waxay ka caawisay dadka iyo ganacsiyada inay kaydiyaan tamarta oo ay yareeyaan qashinka.
Wixii macluumaad dheeraad ah booqo centerforecotechnology.org.
Aqbalaada Abaalmarinta 2020-2021
Suuqa Cusub ee Guido
Guido's waxay muujisay hogaaminta deegaanka ee cajiibka ah ee bulshada: xaddidida balaastigga hal mar la isticmaalo, maalgashiga waxtarka tamarta iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo, iyo kahelashada beeraha maxalliga ah.
Guido's waxay sidoo kale maalgashatay nidaam shiidaya qashinka cuntada iyadoo la adeegsanayo mashiinka mashiinka lagu xoojiyo, xoogna u leh warshadaha. Qashinka cuntada waxaa loo beddelaa wasaqda tamarta hodanka ah waxaana loo qaadaa xarunta dheefshiidka anaerobic halkaas oo methane laga soo saaro soosaarka tamarta. Inta soo harta biosolids waxay noqoneysaa bacriminta nafaqada leh.
Guido's waa tiir bulshada dhexdeeda ah, oo bixisa taageerada dib u warshadaynta iskuulka, taas oo u oggolaanaysa miiska waxbarashada ee ururada bulshada sida CET, waxaana lagu yaqaan inay si gaar ah ula dhaqmaan shaqaalaha iyo macaamiisha.
Abaalmarinta Abaalmarinta 2019
Penner waa gudoomiyaha Gudiga Williamstown COOL (CO2 Hoos udhaca) wuxuuna si firfircoon ugu hawlanaa xubin ahaan ilaa 2005. Gudiga, Penner wuxuu iskaashi la sameeyay Williamstown Elementary School, Mount Greylock High High School, iyo Xarunta EcoTechnology si loo sameeyo wacyigalin iyo waxbarashada ardayda iyo qoysaskooda oo ku saabsan waxtarka tamarta iyo tamarta dib loo cusboonaysiin karo. Iyada jihada iyada, dhowr boqol oo arday ayaa kaqeybqaatay maalmaha tamarta iskuuladooda waxayna booqdeen tas-hiilaadka tamarta nadiifka ah ee dhow sida matoorka dabaysha Jiminy Peak Iyada oo si dhow ula shaqeysa Williams College iyo la-hawlgalayaasha kale ee bulshada, Wendy waxay Williamstown u keentay dhacdooyin badan oo waxbarasho iyo wacyigalin ah, oo ay ku jiraan hadalka isbeddelka cimilada ee Bill McKibben iyo dhowr carwo carwooyinka Maalinta Dunida ah.
Hogaanka Penner, gudiga qaboojinta waxay si dhow ula shaqeeyeen Williamstown si loo gaaro u magacaawida Beesha Cagaaran iyo isku dubaridka barnaamijka Williamstown Solarize MA oo aad ugu guuleystey sanadkii 2013 kaas oo kudhowaad 80 qoys ay ku rakibeen qoraxda PV. Ku dhisida guushaas Penner ayaa dhawaan isku dubariday soo gudbinta codsi loogu talagalay Williamstown si loo sameeyo Solarize Plus - olole qorraxda leh oo dhinacyo badan leh si si weyn kor loogu qaado tirada qalabka tamarta nadiifka ah ee beesheena.
Akhri wax dheeraad ah Wendy guulaha kale ee tirada badan.
Abaalmarinta Abaalmarinta 2018
Kooxda Cagaaran ee Beesha Berkshire Community College
wuxuu fureyaa feylka IMAGE Kooxda Cagaaran ee Berkshire Community College waxay isku dubaridaa dadaallada lagu yareynayo raadadka kaarboonka Koleejka, joogtaynta dhaqamada waara, raadinta maalgelin lagu fuliyo dadaallada, iskuna dubarid dadaalladaas kuliyadaha kale.
Guddiga Kooxda Cagaaran wuxuu hogaamiyaa dadaalada lagu caawinayo kuleejku inuu noqdo mid jawi-saaxiibtinimo leh, waara, oo soo jiidasho leh dadka deegaanka, booqdayaasha, iyo jiilalka mustaqbalka. BCC waxay rakibtay baalayaasha cadceedda, dib-u-warshadaynta iyo compost, sanadkiiba hal marna waxay kafaala qaadaan Madasha Kooxda Cagaaran ee ardayda iyo macallimiinta. Akhri wax dheeraad ah oo ku saabsan Kooxda Cagaaran ee Berkshire Community College halkan.
Abaalmarinta Abaalmarinta 2017
Peter Hofman kuraasta Magaalada Lee Greener Gateways Committee, xubin firfircoon ayuu ka ahaa tan iyo markii isaga iyo xaaskiisa, Phyllis, ay u guureen Berkshires dhamaadkii 2013.
Guddiga Lee Greener Gateways - illaa Diseembar 2016 oo loo yaqaan 'Lee Recycling Committee' - wuxuu hoggaamiyaa dadaallada lagu caawinayo magaalada si ay u noqoto mid bey'adeed u habboon, waarta, oo soo jiidasho leh dadka deegaanka, booqdayaasha, iyo jiilalka soo socda.
Sanadkii la soo dhaafey Guddigu wuxuu gacan ka geystey dejinta iyo meel marinta xeerar cusub, oo dhaqan galay May 12th, nidaaminaya adeegsiga bacaha wax lagu gado ee caagga ah iyo weelasha polystyrene ee Lee. Guddiga iyo la-hawlgalayaasha kale ee Magaalada waxay soo saareen ilaha iyo waxqabadyada si loogu wargaliyo bulshada xeerarka iyo saameyntooda iyo in laga caawiyo dadka deegaanka iyo ganacsatadu inay sameeyaan wixii isbeddel ah ee loo baahan yahay.
Sannadihii ugu dambeeyay Guddigu wuxuu ballaariyay dadaalladiisa eber-qashin ee dhacdooyin badan oo waaweyn, oo ay ku jiraan Lee sannadlaha Aasaasayaasha Usbuuc-dhammaadka, halkaasoo saddex-meelood laba meel qashinka oo dhan dib loo warshadeeyo ama la isku-buuxiyo. Dhacdadii dhadhanka Lee, xubnaha guddiga iyo in ka badan 20 mutadawiciin ah ayaa ka shaqeeyay shan xarumood oo dib-u-warshadaynta-bacriminta-qashinka ah.
Sannadkii 2016-kii Guddigu waxay bilaabeen nadiifin sanadle ah oo magaalada oo dhan ah, waxay bilaabeen qorshe miis-u-dejin ah si looga ilaaliyo cunnada qashinka in la tuuro, waxayna taageertay howlaha dib-u-warshadaynta iyo nafaqeynta ee dhacdooyinka maxalliga ah iyo kuwa gobollada. Anaga oo tix galinayna shaqadan, Rugta Ganacsiga Lee waxay magacawday Guddiga "Iskaa Wax Uqabso Sanadka."
Abaalmarinta Abaalmarinta 2016
Lauren Stevens ayaa ka shaqeysay in ka badan soddon sano si loo ilaaliyo loona wacyi geliyo bey'adeena maxalliga ah.
Lauren wuxuu bilaabay shaqadiisa barasho, wuxuu ku baranayay Ingiriisiga iyo cilmiga deegaanka ee kuliyada Williams. Wuxuu aasaasay Ururka Hoosic River Watershed Association sanadkii 1986 wuxuuna ka soo shaqeeyay guddigiisa agaasimayaasha tan iyo markii la aasaasay, iyo sidoo kale in badan oo sanadahaa ah madaxweyne ama agaasime fulineed. Lauren waxay difaacday isla markaana marin u heshay jidadka iyo wabiyada, Lauren waxay ka soo shaqeysay guddiyo dhowr ah oo agaasimayaal ah waxayna kula talisay ururada iyo waxqabadyada, laga soo bilaabo Ashuwillticook Bike Path iyo Mohican-Mohawk Trail initiative ilaa Golaha La-talinta Boos celinta ee Mount Greylock iyo Iskaashiga Cusboonaysiinta Tamarta ee Berkshire.
Wuxuu sidoo kale gacan weyn ka gaystay wacyigelinta deegaanka maxaliga ah sida qoraa iyo suxufi. Waa qoraaga buugaag dhowr ah iyo qoraa joogto ah oo loogu talagalay 'Berkshire Eagle', wuxuuna 1981 aasaasay Garyaqaanka Berkshire ,. Isaga Baaskiil iyo Socod ku socda Buuraha Berkshire iyo Buugga Berkshire ayaa dib loo daabacay dhowr jeer. Isaguba wuxuu wax ka qoray Maamuuskii ugu fiicnaa: Taariikhda Mount Greylock iyada oo Deborah Burns iyo Old Barns ee Dunida Cusub: Dib-u-dhiska Taariikhda oo uu weheliyo Richard Babcock.
Abaalmarinta Abaalmarinta 2015
Ballanqaad qoto dheer oo ku saabsan ilaalinta deegaankeeda iyo beesheeda ayaa kasbatay Juliette Haas ee Egremont Xarunta EcoTechnology ee daahfurka Alan Silverstein iyo Laura Dubester Award ee Hoggaanka Deegaanka ee Bulshada.
Juliette, oo u adeegta Agaasime ka ah Egremont Board of Health iyo Isuduwaha Egremont Sustainability, waxay heshay abaalmarinta kulan ay isugu yimaadeen Rugta Ganacsiga Berkshire oo ka dhacday Naadiga Waddanka ee Pittsfield bishii Maarso 11, 2015.
Juliette waxay horseedday dhowr tamarta tamarta, tamarta la cusboonaysiin karo iyo dadaallada yaraynta qashinka ee Egremont. Waxay xaqiijisay maalgelinta deeqda si loo hagaajiyo Waaxda Wadooyinka ee magaalada, oo ay ku jiraan rakibidda nidaam kululaynta tamarta cusub iyo qorraxda. Tan iyo markii uu socday qorraxda, qalabku wuxuu soo saaray in ka badan 50,000 kWh tamar nadiif ah, dib loo cusboonaysiin karo. Sannadkii 2009, iyada oo guddoomiye ka ah Guddiga Cagaaran ee Egremont, waxay bilawday "Egremont Recycles", oo ah hal mar sanadkiiba munaasabadda Maalinta Dunida halkaas oo tabaruceyaashu ka soo qaadaan qashinka waddada dhinaceeda ka dibna dib loo warshadeeyo. Waxay sidoo kale ka caawisay magaalada inay sameyso boos iskuduwaha Joogtada ah ee Joogtada ah, oo mas'uuliyadeeda shaqo ay noqon doonto baaritaanka waxtarka tamarta, tamarta dib loo cusboonaysiin karo iyo barnaamijyada yaraynta qashinka. Waxay mar dhow u shaqaysay Tababar Qoraxeed (Solar Coach) oo ay dawladu maalgaliso mashruuca “Solarize Mass”, iyadoo ka caawisay afartan qoys Egremont inay rakibiyaan qorraxda.
Juliette waxay maamule ka noqotay Gudiga Maareynta Biyaha Qashinka ee Egremont sanadihii 2002-2005, halkaas oo ay kaalin weyn ka qaadatay soo bandhigida mashruuc $ 4 milyan oo bullaacad ah magaalada, taas oo heshay ku dhowaad $ 1 milyan oo deeqda federaalka ah. Waxay ka shaqeysay muddo shan sano ah Golaha Dhaqanka ee Alford / Egremont waxayna gudoomiye ka ahayd seddex.
Isqor warsidaheena wararka, cusbooneysiinta, iyo ficilada aad maanta qaadi karto!
Asturnaantaada ayaa muhiim noo ah - ma sii deyn doonno, iibin doonno, ama ka ganacsan doonno macluumaadkaaga xiriirka.